ဇန်နဝါရီ 2018 – Myanmar Home & Decor Magazine Official Website
ဇန်နဝါရီ 3, 2018 နေ့
တစ်နေ့သ၌ ကျွန်ုပ်ထံသို့ ကျွန်ုပ်၏ကျောင်းနေဘက်သူငယ်ချင်းဖြစ်ကြကုန်သော အောင်ဇော်လင်း၊ခင်ငြိမ်းဦး၊မိုး ကျော် စသူတို့ရောက်ရှိလာကြလေ၏။
ကျွန်ုပ်လည်း ၎င်းတို့အား မနောမယလ္ဘက်ရည်ကိုဖျော်၍ဧည့်ခံရလေ၏။ ကျွန်ုပ်သည်လ္ဘက်ရည်ကိုအ လွန်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်အကြောင်းသိနေသောခင်ငြိမ်းဦးက……………
” နင်အဲဒီလောက်လ္ဘက်ရည်တွေသောက်တာ ဆီးချိုတွေဘာတွေလည်း သတိထားဦး…….ဟု” ပြော၏။ ကျွန်ုပ်က………
” ငါ့ကိုဆရာကြီးပြောသွားတာကတော့ ဒီခေတ်ကြီးမှာ သူသူကိုယ်ကိုယ်ဆိုသလိုဘဲ အသက်လေးဆယ် တန်းလောက်များရောက်လာပြီဆိုရင် ဆီးချို၊သွေးချိုဆိုပြီး အနည်းနဲ့အများရှိလာကြတော့တာပဲ။ လူတိုင်းမဖြစ် ပေမယ့်၊ လူတိုင်းနီးပါးဖြစ်လာကြတယ်ပေါ့ဟယ်။ အဲ့ဒါဆိုရင် ဆီးချိုဆိုတာဟာရောဂါမဟုတ်တော့ဘူး။ ဖြစ် တတ်တဲ့သဘာဝတစ်ခုဖြစ်လာနေပြီ။
ဥပမာဆိုပါတော့…….လူတွေအသက်ကြီးလာရင် ဆံပင်တွေဖြူလာတယ်။ သွားတွေမကောင်းတော့ဘူး။ လူတိုင်းမဖြစ်ပေမယ့် အများစုကြုံလာရတဲ့ကိစ္စပေါ့။ ပျောက်ကင်းအောင်ကုဖို့လည်း မရတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။ ဆံပင်ဖြူ ဖြူတဲ့အတိုင်း၊ သွားတွေမကောင်းရင် မကောင်းတဲ့အတိုင်း၊ အဆင်ပြေအောင် နေသွားဖို့ပါပဲ။
ဆီးချိုဆိုတာကလည်း လူအများစုဖြစ်လာကြတယ်။ ဖြစ်ပြီဆိုရင်လည်း မပျောက်တော့ဘူးဆိုတော့ သူလည်း ရောဂါတစ်ခုအဖြစ် မြင်နေလို့မရတော့ဘူး။ အသက်ကြီးလာရင်ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသော သဘာဝတစ်ခု လိုပဲ အောက်မေ့ရတော့မှာပဲ။ အခုထိတော့ ငါ့မှာဆီးချိုမရှိသေးဘူးဟ။ ရှိလာခဲ့ရင်လည်း ရှိတဲ့အတိုင်းကလေး အဆင်ပြေအောင်နေသွားဖို့ပဲပေါ့ဟာ……………” ဟု ပြောလိုက်ရာ ခင်ငြိမ်းဦးလည်း’ နင်ကတော့လုပ်ပြီ’ ဟူ သော မျက်နှာကလေးဖြင့် မျက်စောင်းထိုးလေ၏။ ထိုအခါအောင်ဇော်လင်းက………
” သူငယ်ချင်း……… မင်းကတော်တော်တော့ ကျန်းမာတာပဲကွနော်………” ။ ဟုဝင်ပြောရာ ကျွန်ုပ်က……..
“ အင်း…….အဲဒါကတော့ ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ ငါ့မှာက အလုပ်တွေအရမ်းများပြီးမကျန်းမာခွင့်ကို မရှိတာလို့ ပြောရမလိုဖြစ်နေတယ် သူငယ်ချင်းရေ။ ဥပမာဆိုပါတော့…….. မင်းတို့ငါတို့ အရွယ်တွေဆိုရင် သွေး လေးဘာလေးစတိုးလာကြပြီ။ အချို့များဆိုရင် သွေးပေါင်ချိန်လေးနည်းနည်းတက်လိုက်တာနဲ့ အမေကယ်ပါ အ ဖေကယ်ပါဆိုပြီး ကျွမ်းပစ်နေတော့တာပဲဟေ့။ ငါ့ရဲ့သွေးပေါင်ချိန်က၂၂၀-၁၄ဝဆိုပြီး ရှိတယ်ကိုယ့်လူရေ။ ဘာ လက္ခဏာမှတော့မပြဘူး။ ချိန်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ ဒီလောက်နဲ့နေနေတာကိုယ့်လူရေ………..” ဟုပြောလိုက်ရာ ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများသည်မျက်လုံးကြီးများပြုး၍ ရင်ဘတ်ကိုလက်ဖြင့်ဖိကြလေ၏။
ထို့နောက် မိုးကျော်သည်လ္ဘက်ရည်ခွက်ကိုကောက်၍ မော့လိုက်ပြီးလျှင်………. “ အခုမင်းဆီရောက်လာ ကြတာက မင်းကိုသတိရလို့လာကြတာကွ။ မင်းကိုသတိရတယ်ဆိုတာ ငါတို့အတွက်သတိရတာကွ…..။
ခင်ငြိမ်းဦးကတော့ မင်းနဲ့နီးပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာ စာသင်တဲ့ဆရာမကြီးလုပ်နေတယ်။ အောင်ဇော်လင်း က ကသာမှာ စိုက်ပျိုးရေးသမားကြီးလုပ်နေတယ်။ ငါကတော့ မင်းသိတဲ့အတိုင်း တောင်တွင်းကြီးနားက “ ကု ကိ္ကုလ်ခွ” မှာ စတိုးဆိုင်ဖွင့်ပြီး ကုန်သည်လုပ်နေတယ်ပေါ့ကွာ။
အဲ့ဒါ မင်းပြောပြနေတဲ့ ကံ၊ ညဏ်၊ ဝီရိယဆိုတဲ့ သုံးချက်မှာ ညဏ်ပိုင်း၊ ဝီရိယပိုင်းကတော့ ငါတို့ဟာငါ တို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။ ကံနဲ့ပက်သက်လာရင်တော့ မင်းကိုသတိရမိကြတယ်ပေါ့ကွာ ဟု…….” ပြောလေ၏။ ကျွန်ုပ်လည်း…………
” အင်း………. တော်တော်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့သူငယ်ချင်းပဲဟု” ရေရွတ်မိလေ၏။ ထို့နောက် ကျွန်ုပ်က……….
“ ပြောစမ်းပါအုံး……” ဟုစကားကိုထောက်ပေးလိုက်ရာ မိုးကျော်က…………..
” ဒီလိုပါကွာ၊ ငါတို့လည်း ငါတို့အတိုင်းအတာနဲ့ငါတို့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေကြတာ ပင်ပန်းပေမယ့် ပင်ပန်းရကျိုးနပ်ကြပါတယ်။ ပျော်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေမှာ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့် စိတ်ညစ်ရ တာမျိုးတွေဘာတွေတော့ ရှိတတ်တယ်ကွ။
အိမ်နီးချင်းက ကိုယ့်ကိုစောင်းမြောင်းနေတာတို့၊ ဆိုင်နီချင်းက ကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးဖို့အတွက်ရှာနေတာတို့၊ ဘာမဟုတ်တာလေးတွေနဲ့ ရပ်ကွက်လူကြီးကိုသွားပြီး တို့တာထောင်တာတို့ အဲဒါမျိုးလေးတွေတော့ ကြုံလာ တတ်တာပေါ့ကွာ………..” ဟု ခပ်ညည်းညည်းကလေးပြောလေ၏။ ထိုအခါ ကျွန်ုပ်ကရယ်၍ ……….
” မင်းတို့ကဘာမို့လို့လဲကွာ၊ မြတ်စွာဘုရားကြီးမှာတောင် မလိုမုန်းထားသူဆိုတာတွေက ရှိခဲ့သေးတာပဲ ဟာ………….. အေးပေါ့လေ………..ဘယ်အခြေအနေပဲရောက်ရောက် အကောင်းဆုံးတော့ကြိုးစားရုန်းကန်ရမှာ ပေါ့။
ငါတို့ဆရာကြီးအဘမင်းသိင်္ခ သင်ပေးသွားခဲ့တာကတော့ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်က ကိုယ့်ကို မနာလိုဝန်တို တွေဖြစ်ပြီး စိတ်ဆင်းရဲခြင်း၊ ကိုယ်၏စိတ်ဆင်းရဲခြင်းတွေဖြစ်အောင်၊ ငြူစူစောင်းမြောင်း ဒုက္ခပေးတာမျိုးတွေလုပ် နေမယ်ဆိုရင် အဲဒီလို အနှောင့်အယှက်ပေးနေတဲ့ဘက်မှာ (ကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်ပေ့ါကွာ) ဇွန်းကြီးကြီးတစ်ချောင်း ကို ကြိုးလေးနဲ့တွဲလောင်းချိတ်ထားလိုက်ရတယ်ကွ။ အဲ့ဒီဇွန်းလေးကိုမကြာမကြာ ကိုင်ကိုင်ပြီးလှုပ်ရင်း ဆု တောင်းရတယ်ကွ။ အဲ့ဒါဆိုရင် ကိုယ့်ကို ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကနေ အနှောင့်အယှက်ပေးနေတဲ့ကိစ္စဟာ တစ် နည်းမဟုတ်တစ်နည်း ပြေပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာ……….” ဟုပြောလိုက်ရာ ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများ လည်း လ္ဘက်ရည်ခွက်ထဲမှ လက်ကျန်လ္ဘက်ရည်များကိုပြိုင်တူမော့ချလိုက်ကြရင်း…………..
“ ဒီနေ့တော့ သူငယ်ချင်းဆီကိုလာရတာတန်သွားပြန်ပြီဟေ့……….” ပြောလိုက်ပါလေတော့သတည်း။